आदित्य नारायण असार २१मा नेपाल आउने « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
आदित्य नारायण असार २१मा नेपाल आउने
११ असार २०७६, बुधबार १३:४९
काठमाडौं : पछिल्लो समययता विदेशी गायकको नेपाल आउने ओइरो लागेको छ । नेपाल आएर नेपाली दर्शक माझ विशेष कार्यक्रममा आफ्नो उत्कृष्ट गीत गाउने पाइएको छ । उक्त लिस्टमा आदित्य नारायण झाको पनि नाम थपेको छ । उनी जुलाई ६ मा नेपाल आउनेछन् ।
केहि वर्ष अगाडी पोखरामा कन्सर्टका लागि आएका आदित्य काठमाडौंका संगीतप्रेमी माँझ गुन्जिने भएका छन् । जुलाईको ६ तारिख अर्थात आउँदो असार २१ गते आदित्य राजधानीको ठमेल स्थित क्लब फरेनहाइटमा लाइभ प्रस्तुत हुनेछन् ।
‘आदित्य नारायण झा लाइभ इन नेपाल’ मा उनले आफ्ना तथा बलिउडसँगै नेपालको हिट गीतलाई प्रस्तुत गर्नेछन् ।
उनले आफैले बनाएको भिडियोमार्फत नेपाल आउने जानकारी दिएका हुन् । ‘म आदित्य नारायण भिजिट नेपाल २०२० अन्तर्गत नै नेपाल आउँदैछु’ भिडियोमा उनले सम्बोधन गरेका छन् । उनले नेपालीसँग आफुले समय बिताउनेमा विश्वस्त रहेको जनाउदै सबैलाई कार्यक्रममा निम्तो समेत गरेका छन् ।
गायकसँगै एक्टर समेत रहेका आदित्य प्रसिद्ध गायक उदित नारायण झा र दीपा झाको छोरा हुन् । केहि दिन अगाडी आदित्य नेपाल आउने चर्चा भएता पनि डेट फाईनल भएको थिएन ।
उनी नेपाल आएसँगै पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएर बेलुकीको तयारीमा जुट्ने समेत आयोजकले जनाएका छन् । क्लब फरेनहाइटकै आयोजनामा हुने यस कार्यक्रममा प्रवेशका लागि जेनरल टिकेट १ हजार र भिआइपी १५ सयको राखिएको छ । कार्यक्रमकै समयमा टिकट खरिद गर्न गएमा यसमा ५ सय थप लाग्ने समेत आयोजकले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: ११ असार २०७६, बुधबार १३:४९
प्रदेश सरकार आफैँले बनाउने भयो हेटौँडा-काठमाडौँ सुरुङमार्ग
हेटौंडा : प्रदेश सरकारले हेटौँडा काठमाडौँलाई सुरुङमार्गमार्फत जोड्ने तयारीलाई तीव्र पारेको छ। उक्त सुरुङ्मार्गको प्रदेश
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गरिएको तेस्रो कलेजो प्रत्यारोपण सफल
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा गरिएको कलेजो प्रत्यारोपण कार्यले सफलता प्राप्त गरेको छ । शुक्रबार रुपन्देहीका
चर्चित गायक दुर्गेश थापा विवादमा, जरिवानासहित २ वर्ष जेल पर्न सक्ने
गायक तथा मोडलका रुपमा चिनिएका दुर्गेश थापा अहिले विवादमा परेका छन् । तीजको समयमा ‘बिच्च
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन ३ दिनदेखि अस्पताल भर्ना
मुम्बई : बलिउडका दिग्गज कलाकार अभिनेता अमिताभ बच्चन ३ दिनदेखि अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।
पूर्व मिस नेपाल उषा खड्की र जीपी तिमल्सेनाकोे वैवाहिक जीवन धरापमा !
काठमाडौं : कुनै बेलाको उदाहरणीय जोडी पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी र सञ्चारकर्मी जीपी तिमल्सेनाको
सियोल : दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाकी छोरी जेनानी मण्डेला-डामिनी दक्षिण कोरियाको राजदूतमा नियुक्त
रौतहट बम बिस्फोट घटानाको अनुसन्धानमा सहज, घाइतेहरु प्रहरीको सम्पर्कमा
दुहबी नगरपालिका एक्सनमा
मैले किन राजीनामा दिने ? म अहिले नेकपामा छैन : महरा
समाजवादी थारु संघ सुनसरी जिल्ला गठन
नेपाल सरकारसँग १२ अर्ब भित्र्याउने भनेर एमओयु गरिसकेका छौँ : अध्यक्ष पन्त